सुदूरपश्चिमका १२ स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन, कहाँ–कहाँको नाम र केन्द्र परिवर्तन ? « Naya Page
सुदूरपश्चिमका १२ स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन, कहाँ–कहाँको नाम र केन्द्र परिवर्तन ?
प्रकाशित मिति : 17 February, 2019 8:04 am
बैतडी, ५ फागुन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२ स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन गरेको छ ।
बैतडीको सिगास गाउँपालिकाको केन्द्र साविकको शिवलिङ्ग गाविसको गर्जे कायम गरिएको छ । यसअघि उक्त गाउँपालिकाको केन्द्र गर्जे अथवा गाँजरी राख्ने भन्ने निर्णय भएको थिएन । सबैलाई पायक पर्ने र बीच केन्द्र भएकाले गर्जेमा केन्द्र राख्ने निर्णय गरेको सिगास गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिसिंह धामीले जानकारी दिए ।
सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही दिन अगाडि देशका ९८ स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन गरेको हो । हेरफेर गरिएको नाम तथा केन्द्रबाट काम कार्वाही अगाडि बढाउन समेत सरकारले निर्देशन दिएको छ ।